असोज १० गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने
काठमाडौं । दसैँका लागि असोज १० गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन लागिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनबीच शुक्रबार भएको बैठकले टिकट बुकिङ असोज १० गतेदेखि खुलाउने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् । भाडा समायोजनको विषयले अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्न समस्या नहुने प्रवक्ता डा.भुसालको भनाई छ ।
लामो दूरीका बाटामा सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडा दरका आधारमा हुने तथा मध्यम दूरीमा तत्काल समायोजन भएमा नयाँ भाडादर र नभएमा पुरानै भाडादरमा टिकट काटिने उनको भनाई छ ।
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम अझै रहेकाले त्यसको असर चाडपर्व लक्षित टिकटमा पर्ने देखिएको छ । जे जसरी भए पनि यात्रुलाई सजिलै घर जान पाउने व्यवस्था मिलाइने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाई छ । उनले भने, “गत आवमा अग्रिम टिकट नखुलाएर पनि फर्कन चाहनेलाई व्यवस्था मिलाइएको थियो । यस वर्ष पनि सबैलाई घरघरमा पुर्याइनेछ ।”
कोभिडकै कारण गत वर्ष अग्रिम टिकट नखुलाइए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न कुनै समस्या नभएको महासचिव सिटौलाले बताए । अहिले पनि काम नभएका वा छिट्टै फर्कन मिल्ने व्यक्ति घर फर्कँदै गर्दा दशैँको मुखमा हुने भीड कम हुनेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले असोज १० गतेदेखि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने
1. दशैंको टीकाको शुभसाइत सार्वजानिक
2. काठमाडौं महानगरपालिकाले असोज १० गतेदेखि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने
3. एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी चयन
4. अमेरिकाले ५० करोड डोज कोरोना खोप दिइने
5. आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु